UMariam Orazal. Udliwano-ndlebe nombhali Unyango loMphefumlo | Uncwadi lwangoku
UMariam Orazal. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi Unyango loMphefumlo
Ukufota: UMariam Orazal, iprofayile kaFacebook.
UMariam Orazal ligama lobuxoki lombhali kunye nentatheli evela Badajoz, uphumelele kuNxibelelwano lwe-Audiovisual kwaye uzinikele kunomathotholo. umthandi we inoveli yothando, wagqiba ekubeni apapashe eyakhe yaye sele enayo abambalwa. eyokugqibela ngu unyango lomphefumlo. Ndiyalixabisa kakhulu ixesha lakho nobubele bakho ngale nto udliwano ndlebe apho asixelela ngaye nokunye okuninzi.
UNCWADI OLUTHETHAYO: Inoveli yakho entsha inesihloko unyango lomphefumlo. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
UMARIAM ORAZAL: unyango lomphefumlo yathetha kum enye yeeprojekthi ezinomdla kakhulu ebomini bam. Ndingene kakhulu kwiinoveli ezilula kwaye ukuqalisa le ncwadi yinto endingazange ndiyijonge. Singatsho ukuba ibali liyandithatha. Intlantsi eyavutha ingcamango yayiluphando ngokwalo; Ngenye imini, ndijonge idatha yenye inoveli, ndafumanisa ukuba Ugqirha wokuqala waseNgilani obhinqileyo wayephile ubomi bakhe bonke njengendoda ukuba ikwazi ukwenza ubugqirha. Kwaye akukho nto yimbi yayifuneka. Phantse ngoko nangoko wazalwa Paige kwaye ndandiyazi into awayefuna ukuyithetha.
KWI: Ungabuyela kulaa ncwadi yokuqala uyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
I-MA: Ufundo lwam lokuqala lwaba iindaba. Yabadla. Inyathelo elisengqiqweni laliza kuba ziinoveli zabantwana nabaselula, kodwa inyaniso kukuba xa ndandineminyaka eli-13 ubudala yaye emva kwexesha elithile ndingenamdla kangako wokufunda, ndafumanisa ukuba Indlu yeMimoya. U-Isabel Allende wandibuyisela endleleni elungileyo, kwaye ukususela ngoko andizange ndiyeke ukuba ngumfundi onyanzelekileyo.
Njengombhali, nangona kunjalo, umsebenzi yafika kum kakhulu mva. Inoveli yam yokuqala yaba yenye yazo abantu basezintabeni, okusingqongileyo endikuthandayo nam, kunye ne Ukusebenza kwakhona. Ibizwa Umnikelo kwaye isapapashwa kwindawo apho yavela khona, kwiqonga leWattpad.
MA: Andikwazi ukugcina enye, ndiyoyika. Nangona ndiya kuhlala ndisithi ndinetyala elikhulu UJohanna lindsey. Nguye owandivulela ucango lokuba ndithandane, owabangela kum olu thando loncwadi, kungekhona nje ukulufunda kodwa nokulubhala. Nangona mhlawumbi akasiso ireferensi endinayo namhlanje xa ndibhala. Ndiyathanda ULisa Kleypas, UMary Balogh, uJulia Quinn, uSara Maclean… Ngokuzimisela, zininzi kangangokuba andinako ukuzichaza zonke.
MA: Beka a Derek Craven ebomini bakho… Abalinganiswa abangamadoda nguLisa Kleypas Bahlala bethandeka kwaye bengalibaleki kancinci, kodwa umlingiswa kaDerek obandezelekileyo, ubukrelekrele bakhe, ukukwazi kwakhe ukulawula yonke into kunye nomntu wonke ngaphandle kothando ... Ndingathanda ukukwazi ukwenza umlingiswa onjengaye. Ngenye imini ndiza kwenza njalo.
MA: Ndingumnquli we cwaka. Anditsho ukuba andikwazi ukufunda okanye ukubhala ngeziphazamiso ezithile, kodwa xa ndikwazi ukwenza oko ndithule ndingoyena mntu wonwabileyo ehlabathini. Ela qamza lincinci ndilidalayo elindijikelezileyo lixolo nolonwabo.
MA: yho, jonga, andixakwanga yilento. Ndidla ngokufunda ngaphakathi isofa nangaphakathi ncwadi yekhompyutha, kodwa ndiyavuma ukuba amava am anomvuzo ahlala eneencwadi papel. Ukubhala andinalo ukhetho olucacileyo lwaso nasiphi na isixhobo. Xa "ndihlala phantsi" ukubhala, ndihlala ndisiya kwi-PC, kodwa ndibhala imiboniso epheleleyo kwi ehambayo, kuxhomekeke apho undibambe khona.
MA: Ndiyakuthanda ibali lembali, kakhulu. Kwaye ngokunjalo inoveli emnyama. Ngothando ndifunde yonke into, nangona ndihlala ndigxininisa kakhulu kwi-regency yembali okanye i-Victorian.
Ufunda ntoni ngoku? Ukubhala?
MA: ndiphinda ndifunda Scoundrel Rules nguSarah Maclean. Ngokuphathelele umsebenzi, inoveli ekwiSalon eKhethekileyo indivulele umnyango oyingozi nomangalisayo. Ndiphinda ndidibana Chadwick kwisizukulwana sesibini, kwaye ukuza kuthi ga apha ndiyakwazi ukufunda.
MA: Icandelo lopapasho li intsonkothile kakhulu. Singamawaka, izigidi, ezingathanda ukufumana umsebenzi wokubhala kwaye, nangona kukho amawaka kunye nezigidi zabafundi abasebenzisa iincwadi zethu, akwanelanga ukuba wonke umntu aphumelele. Ngethamsanqa, injongo yam kweli hlabathi ibisoloko ikukonwabela inkqubo, ndiyiphile... kwaye ndifumene intuthuzelo enkulu kunye nolwaneliseko ngokwenza oko no-Selecta, umshicileli wam. Ndagqiba kwelokuba ndiyipapashe kuba ndandifuna ukwenza abanye bayive le nto ndiyifundayo, yaye uLola Gude wayenza yalula kakhulu kum. Amava am ahlala elungile, Andikwazi ukuthetha malunga necandelo, nangona ndingaphiki ukuba, ngamanye amaxesha, kunokuba nokungabi nambulelo.
I-MA: Zonke iziganeko zobomi, ezonwabileyo nezimangalisayo, zingumthombo wokhuthazo. Xa umntu esebenza ngokudala iimvakalelo, ukucinga okusekwe kwiziganeko adibana nazo akunakuphepheka. Amandla abantu baseUkraine, isibindi sabo kunye nobunzima babo jikelele, ziyafana zihambisa intombazana encinci kumaxesha aphakathi ukubaleka okanye ukujongana noloyiko loyise okhohlakeleyo okanye ulawulo olucinezelayo. Ewe le nto yenzekayo iyandichaphazela, kodwa nangona kunjalo usizi ngamanye amaxesha injini yokudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UMariam Orazal. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi Unyango loMphefumlo
Iimpawu zesicatshulwa esibalisayo
UPio Baroja: iincwadi